Izindawo Izingcingo Zakho Zokusebenza | Martech Zone
Sihlala sihlola ama-Call to Action kumasayithi ethu nakumakhasimende ethu. Lokhu kungaba okuthunyelwe okuyisisekelo, kepha kunezindawo eziningana zokunikeza indlela yokuzibandakanya kuwebhusayithi ejwayelekile. Ngingakhuthaza izinkampani ukuthi zihlele lezi zindawo ezingqikithini zazo zokuphatha okuqukethwe ukuze kube lula kumabhizinisi ukwengeza, ukuvuselela, nokuhlola ukubizelwa esenzweni okuhlukile. Izindawo ze-CTA zesayithi lakho:
Isayithi libanzi - ukuba nendawo engaguquguquki kusuka ekhasini kuya ekhasini lapho umsebenzisi angalindela ukubona ukubizelwa esenzweni kubalulekile. Lokhu kungaba yiphaneli ekhasini lonke, iphaneli lesilayidi phansi / phezulu (kufana nephaneli yethu yokubhalisa), noma i-popover div. Hlola I-piano ku-Flash futhi uzobona iphaneli ngenhla konyawo onqamula isayithi lize Bhalisa Namuhla.
Okungeziwe - abantu baskena amakhasi ngephethini ka-F kusuka kwesobunxele kuye kwesokudla. Ibha eseceleni ye-CTA iyindlela enhle yokubamba umbono wabantu njengoba befunda umugqa nokuqukethwe kwekhasi. Amaphoyinti ebhonasi uma ungagcina ukubizelwa esenzweni kuhambisana nokuqukethwe uqobo. Sibeka ama-CTA kubha yethu eseceleni futhi ashicilelwa ngamandla kuya ngesigaba okuthunyelwe okushicilelwe kuso.
Ekusakazeni - kuphazamisa kancane, kepha ukufaka isimemo esenzweni ngaphakathi kokuqukethwe kwakho, kungaba ngesixhumanisi, inkinobho noma i-CTA, kungaqinisekisa ukuthi kuyabonakala. Izinhlelo eziningi zokuphathwa kokuqukethwe zizokuvumela ukuthi uhlunge okuqukethwe kwakho, ngakho-ke ungangeza ukubizelwa esenzweni omaki bezindima ezimbalwa ngaphakathi noma ngaphambi / ngemuva kokuqukethwe kwekhasi lakho.
Qiniseka ukuthi ufunda kabanzi ku- ukuqonda Ukuhlelwa kwe-F ku-Webdesigntuts +:
Sibonile imiphumela emangalisayo kuphaneli yethu yokubhalisela phansi Martech Zone. It isebenza kangcono ngaphezu kuka-400% kunokubiza kwethu okusakazwayo okusakazwayo kusenzelwa okuthunyelwe kwethu. Nginesiqiniseko sokuthi kunezinguquko ezithile esingazihlola ukuze sithuthukise imiphumela, kepha imininingwane yokuqala inikeza imininingwane yokuthi lapho siphazamiseka kakhulu, imiphumela iba ngcono. Sivame ukuncika ekuphikiseni lo mkhuba ngoba asifuni ukulahlekelwa izithameli zethu ngoba sishaya izikhangiso yonke indawo… kepha kufanelekile ukuthi sikusho.
Tags: shayela esenzwenishayela endaweni yesenzoctaukulandela isof isakhiwoekusakazeni ucingo lwezenzoizikhangiso ezisemgqeniukubizelwa ezenzweni
Amasu we-imeyili ashintsha kanjani
I-Oct 10, i-2013 ku-8: i-29 PM
iyiphi i-plugin oyisebenzisile ukuthola ibha yokungena phezulu kakhulu kubhulogi?
Okthoba 15, 2013 ngo-9: 33 AM